Filtrer les éléments par date : lundi, 08 avril 2019
lundi, 08 avril 2019 22:07
Korontana tany Maroantsetra
Nanao fanambarana androany ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka
lundi, 08 avril 2019 21:55
Oniversite an'Antananarivo: Hikatona tanteraka ny vavahady manomboka ny talata 09 Aprily 2019
Nanao fanambarana ao amin’ny pejiny facebook ny SECES Sampana Antananarivo androany, milaza fa hitohy ny fitokonan’izy ireo. Hikatona tanteraka ny vavahadin'ny Oniversite an'Antananarivo manomboka rahampitso talata 09 Aprily 2019. Vao maika izany hikatso tanteraka ny fampianarana ambaratonga ambony eto Antananarivo.
Anton’izao fitokonana izao, raha ny fanazavana hatrany dia “tsy ampy ny Mpampianatra sy Mpikaroka, tsy misy anefa ny fandraisana vaovao”. “Ireo am-perin'asa nahavita be tamin'ny fanompoana tsy hasondrotra noho ny fikatsoan'ny ''reclassement'' sy ''avancement'' navoakan'ny Ministeran'ny toe-karena sy vola ary ny teti-bola”. Ary “Ireo Zokiolona manana traik'efa tsy avela hanohy satria nofohanana ny ''maintien en activité''.
lundi, 08 avril 2019 21:43
Tiako i Madagasikara: Olga Ramalason no Sekretera jeneraly vonjimaika
Nampahafantarina androany tao amin'ny foiben-toeran'ny Tiako i Madagasikara, eo Bel'Air Antananarivo ny Sekretera jeneraly vonjimaikan'ny antoko dia Ramalason Olga.
Nametra-pialana tamin'ny 16 febroary 2019 ny Sekretera jeneraly tompon-toerana, Andriamahefaparany Olivier Donat.
Vonjimaika ihany ny fanendrena natao hoy i Marc Ravalomanana, filoha nasionalin'ny Tiako i Madagasikara, mandrampahatonga ny kongresy nasionalin'ny antoko hifidianana ireo tomponandraikitra samihafa.
Loholon'i Madagasikara i Olga Ramalason. Efa minisitry ny varotra teo aloha, efa Ben'ny tanànan'ny Kaominina ambonivohitra Antsirabe ihany koa.
lundi, 08 avril 2019 17:07
Ambanja: Nohamafisina ny fisavana amin'ny alina
Tsy mandry fahalemana aty amin'ny faritra Sambirano, indrindra amin'izao ankatoky ny fisokafan'ny taom-piotazana lavanila izao.
Nohamafisina ny fitandroana fahalemana ary maromaro ny fepetra noraisina momba izany.
Misy ny andrimasom-pokokolona isam-pokontany miambina isak'alina. Misy fisavana kara-panondro ho an'ireo mivezivezy amin'ny alina. Tsy maintsy mikatona amin'ny 9ora alina ny Bar.
lundi, 08 avril 2019 14:06
Volley-ball - Lalaon'ny Nosy: Nanampy ny ekipam-pirenena malagasy ny Jeneraly Richard Ravalomanana
« Coach » na mpiahy Ekipam-pirenena malagasy amin'ny taranja Volley-ball (Lahy sy vavy) ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, Jeneraly Richard Ravalomanana.
Manoman-tena etsy amin’ny ENS Ampefiloha izy ireo amin’izao fotoana, ho fiatrehana ny Lalaon'ny Nosy izay atao atsy amin'ny Nosy Maorisy
Ny 06 aprily teo no tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo mpilalao ao amin'ny Ekipam-pirenena malagasy (Lahy sy vavy) amin'ny taranja Volley-ball ny Jeneraly Richard Ravalomanana, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria amin'ny maha Ministre-coach volley-ball azy.
lundi, 08 avril 2019 13:39
Andapa (RN5A): Kamiao nitrongy tranon’olona, zaza roa matory maty tsy tra-drano
Ny alahady 7 aprily efa hisasak’alina no niseho ny loza teo amin’ny tanàna somary anaty fiolahana hiditra an’Andapa, amin’ny lalam-pirenena faha-5A.
Kamiao no namantana tany an-tranon’olona amin’ny andro alina, ny olona efa tapi-tory avokoa. Trano efatra no indray potika, nofaohin’ilay kamiao vao tafajanona. Zaza roa tao anaty torimaso, maty tsy tra-drano, ankoatra ireo naratra. Nisy fiara simba ihany koa.
Nitsoaka ny mpamily taorian’ny loza. Misokatra ny fanadihadiana.
lundi, 08 avril 2019 13:37
FJKM Mahazoarivo Fanilo-Fitahiana: Hanorina trano ho an’ny Mpitandrina handeha hisotro ronono
Mankalaza ny Jobily faha-25 taona naha Mpitandrina an-dRandrianarisoa Satarivony ny FJKM Mahazoarivo Fanilo-Fitahiana - Antananarivo II. Nisy ezaka fanangonam-bola natao ny sabotsy 30 martsa teo, hanamboarana trano ho an’ny Mpitandrina sy fianakaviany izay handeha hisotro ronono.
Nanome biriky 10 000 isa Randrianarisoa Stanislas na Rastany, kandida solombavambahoaka narotsaky ny Tiako i Madagasikara ao amin’ny Boriborintany faha-II ho anjara birikiny amin’izany.
lundi, 08 avril 2019 12:47
Un président et le syndrome post-traumatique d'une guerre
Selon un article paru dans le New York Times, après une étude financée par le gouvernement américain, 11% des vétérans du Vietnam souffrent toujours de stress post-traumatique. Plus de 40 ans après la fin de la guerre du Vietnam, de nombreux vétérans sont encore affectés par des troubles psychiques liés au traumatisme de l’expérience du combat avec des symptômes comme des cauchemars et flash back récurrents, ainsi qu’une anxiété paralysante ainsi que de dépression aigüe.
Mais près d’un tiers des soldats ayant combattu en Afghanistan et Irak souffrent aussi de cette condition, le ministère responsable des anciens combattants est inquiet de ces résultats qui indiquent la nature chronique de ces troubles. Un tiers souffre de dépression aiguë.
«Pour les vétérans qui souffrent de ces troubles, la guerre n’est toujours pas finie», résume le psychiatre William Schlenger, un des auteurs de l’article.
L'un des Présidents élu à Madagascar qui a eu l'onction de tous : tout candidat confondu, les partenaires financiers étrangers, les différentes chancelleries, et ce malgré les tumultes post-électorales. Dès son investiture, il a voulu marquer qu'il est bien l’élu légal et légitime, à tel point qu’il a mis sur le drapeau même la cocarde de la République.
lundi, 08 avril 2019 12:28
Antsirabe: 12 volana ny karaman’ny mpiasan’ny Kaominina tsy voaloa
Mikatso ny asa aman-draharaha ao amin’ny Kaominina Antsirabe I, renivohitry ny Faritra Vakinankaratra. Mifanenjana ny Ben’ny Tanàna sy ny mpiasa. Tsy nandray karama efa ho 12 volana izao ireto farany.
Vokatr’io izao dia zaza teraka efa mananika ny 1 500 isa oe no tsy voasoratra ao amin’ny sora-piankohonana.
lundi, 08 avril 2019 12:04
Fifandonana tamin’ny dahalo: Nodimandry i Sergent Chef Tafita Jean de La Croix
Nodimandry androany maraina ilay miaramila Sergent Chef naratra mafy rehefa nifanehitra tamin’ny dahalo tany Maintirano tamin’ny alarobia 3 aprily lasa teo.
Miaramila tao amin’ny « Détachement » faritr’i Andreha i Sergent Chef Tafita Jean de La Croix. Nanenjika dahalo izy ireo tamin’io andron’ny alarobia io. Miaramila efa-dahy izy ireo, ary i Sergent Chef Tafita Jean de La Croix no mpitarika azy ireo.
Nitsofoka tamina trano ny dahalo iray nenjehin’izy ireo dia narahiny, kinanjo maro ireo dahalo efa tao amin’ilay trano, ka nifandrimbonan’ireo nodarohana tao ity Sergent ity vao tafiditra. Ny lohany no tena voa mafy.